Keydso lacagta markaad ku iibsato Online Plus Lacagta $ 10 oo bilaash ah Swagbucks Extension Browser - Lacag Dib u Furi
Home » Freebies » Keydso lacag markaad ku iibsato Online Plus Soo qaado $ 10 bilaash ah oo leh Swagbucks Browser Extension
Haddii aad internetka ku dhexjirto kombiyuutarka telefanka, ka dibna waxaan kuu haynaa dalab aad u xun! Waa fidinta shabakada Swagbucks oo aad ka soo degi karto Google Chrome ama Internet Explorer.
Iyadoo la kordhinayo xayeysiiska Swagbucks, waxaad ku keydsan kartaa lacagta alaabooyinka jimicsiga iyo dhammaan waxyaabaha kale ee iibsiyada ku jira dukaamada internetka ee ugu xiisaha badan sida Amazon, eBay, Walmart, Target, iwm. Waxaad ku heli doontaa lacag caddaan ah oo ku taal dukaamada xulashada, rasiidhyada gaarka ah, iyo xataa inaad hesho lacag la'aan $ 10 lacag la'aan ah markaad saxiixdo. Qeybta ugu wanaagsan ee ku saabsan kordhinta browserka Swagbucks waa in ay tahay 100% FREE si aad u hubiso soo qaado maanta si loo badbaadiyo lacag iyo dib ugu soo celiyo lacagta caddaanka ah!
Swagbucks Shuruudaha Fidinta Browser Shuruudaha iyo Shuruudaha:
Markaad iska diiwaangeliso Swagbucks, waa inaad xubin ka noqotaa "Fure" "Bonus" ee qaybta Swag Ups ee koontadaada. Qiimaha gunnada waxaa lagu kasbaday qaab dhibcood, oo loo yaqaan SB. Soo qaado gunada 1000 SB, taas oo u dhiganta $ 10 qiimo, markaad ugu yaraan $ 25 ku iibsato dukaan ku yaal Swagbucks.com/Shop. Waa inaad heshaa ugu yaraan 25 SB iibsigan, kaas oo aad buuxinayso maalmaha 30 ee diiwaangelinta. MyGiftCardsPlus.com iyo iibsashada safarka uma qalmaan.
Raadinta Waddooyin dheeraad ah oo lagu Sameeyo Lacag Dib U Celin?
Marka lagu daro Swagbucks, waxaan sidoo kale kugula talineynaa inaad u saxiixdo eBates iyo sidoo kale si aad u hesho lacag caddaan ah oo bilaash ah dukaamo badan. Waxaad iska diiwaangelin kartaa eBates halkan BILAASH ah eBates ayaa sidoo kale ku siin doona $ 10 bilaash ah si aad u soo saxiixato!